By admin	 December 13, 2020 Leave a comment
Author: Zulkijas Taktilar
Eeg sida hufan ee.
Dadkaas waxaa ka mid ah Daahir Soomaallida Buraale, oo isagu xafidsan in ka badan boqol gabayada Soomaalida ah oo uu bilaabay isagoo da’yar. Bal u fiirso sida hufan ee isaga oo aan caraatamin uu digada uga dhigay nimankii gabayga soo dhoofiyey. Wuxuu haddaba isugu yeedhay abwaano dhawr ah soomaaloda inay.
Silsilad walba ragga isagu dhibidhacsada ayey la heer tahay oo ay aragtidooda iyo garaadkooda suugaaneed ka tarjuntaa. Your email address will not be published. Silsiladda Xulka Suugaanta Soomaalida: Ninkii billaabay wali ma hayo, laakiin ragga caanka ah ee soo galay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Dhoodaan, Yuusuf Dheere Maxamed Sugaal, Gen.
Masraxiyaddii Aqoon Iyo Afgarad: Mid kale ayaa lagu dhaliilaa beyd soomaallda, deelqaaf, hadal aan haboonayn, dood guracan, qodobka laga hadlayo oo uu dhinac ordo, garawsho xumo, indha-cadays iwm. Wuxuu si dhaxal gal ah u difaacay Soomaalida kale ee nimanka gabyey ku xadgudbeen.
Magacu wuxuu ka raacay beydkii Dhoodaan ee ahaa: Cawaale Xuseen awalle gmail. Suugaanta inta ay ka koobantahay-deeganaada geyiga Soomaaliyeedn, degmo walba waxay leedahay cayaaro hidaha soohdinta dhow ay ku caantahay; galbeed, waqooyi, gobollada dhexe, bari, bartamaha wadanka, koonfur iyo galbeed bari ee Kiinya haysato.
Ha yeeshee, waxaan isku dayey akhristaha inaan farta ugu fiiqo buugga, iyaga oo dhammaystiran, soommaalida markoodii horeba ku soo baxeen, haddiiba buug ay ku soo baxeeni uu jiro. Goloyaashiisii ayaa abaabulay dicaayad ah in dowladu qoys tahay, dadka ku kacsanina qoysas kale yihiin.
Sifooyinkaa iyo kuwa kalaba markii uu qanciyo ayey ama la qurux badnaataa inuu jawaabo ama ay la ahaan weydaa inuu dhexboodo. Nin reer miyi ah oo xafidsan gabay 29 Oktoobar Dhawr abwaan oo Hal-abuur wanaagsan leh ayaa ku jiray.
Waxay silsiladdani mudan tahay raadgooyo dhinac walba ah si gabayadii qaangaadhka ahaa ee la isdhaafsaday oo dhamaystiran loo helo. Silsiladdani waxay u dhaxaysay niman xayndaab hoose wadaaga oo gabayafa u arimin jiray iyo xukunkiisii la isku maandhaafay, dabadeed rag la kala dilay iyo aragtiyo is dabamarsan gabayo badan laga tiriyey.
Ninkaa dambe waxaa magac ugu baxaa beyd gaab iyo goray ciil, waxaana lala mataaniyaa macallin qoryaale iyo kitaab gaab aan Todobada Mingaliyo iyo Suddamada dhinacna u dhaafin.
Bulshada Soomaaliyeed, yar iyo weyn, waxaa suurtagal ah in uu qof xafidiyo maanso qarniyo dhowr ah cimrigeedu yahay. Tixdaa waxaa ka mid ahaa: Wuxuu haddaba isugu yeedhay abwaano dhawr ah oo gabayaea gabyaan amar sooamalida siiyey, gabayadaa oo ay ku raad-goobayaan midnimada qooyskooda.
Diiwaanka Abwaanada Soomaaliyeed ee aadka loo yaqaan, walow diiwaano qoraal jiraan taxa ilaa 70 hobal oo caanah, waxaa safka hore kaga jira raga ay ka midka yihiin Garaad Faarax Garaad oo loo yaqaan Wiilwaal iyo dadkii isku waqtiga ay ahaayeen sida abwaanka caanka ah ee:.
Haddaba halkaa ayuu jawaab kasoo dalwiyey. Qamaan Bulxan isna waa kii labada geed kala booday Maxamed Fiin markii uu ku guuldaraystay inuu arko.
Silsiladdan waxaa kiciyey neef geel ah oo ay niman Camanje Abasguul ku eedeeyeen inuu ka dhacay. Waxay socotay mudo dheer waxaana aakhirkii bud-dhige u noqday Maxamed Cumar Dage oo habeenkii ay bil kowsatay waa wiil la yidhi. Muddo kale ayuu sugay oo sugay. Taas waxay noo cadaynaysaa in ugu yaraan 5 qarni mudo ka badan suugaanta Soomaaliyeed ay soomaaliea hufan u jirtay waagaasna soo gaartay heer aad u sareeya.
Yurub, Afrika iyo Aasiya in yar ayaa ka taariikh dheer ama mudnaan baahsan siiya suugaanta sida aan anaga u gabaywda. Kuwani waa bogag dibedda sopmaalida, waxayna ku furmayaan bog cusub. Daahir waxna ma qoro waxna ma aqriyo Daahir Cumar Buraale waxa ala kulmay Cabdirisaaq Xaaji Catoosh oo ugu horayn weydiiyey qaabka uu gabayadan ku xafiday.
Rag kale ayaa jiray. Abwaan ayaa qoonsada ummuur taagan dabadeed dareenkiisa ku rogroga duruufaha u muuqda. Waa tusaaleyaal aan ka soo dhanbashay gabaygii ama geeraarkii weynaa ee, asal ahaan, ay ka midka ahaayeen. Waxaa kale oo xusid mudan Maxamuud Cali Beenaleey oo aan labadaa qoys midna ahayn inuu gabay dhexdhexaad ah ku darsaday kadib markii niman shirqool waday ay isku dayeen inay kusoo jiidaan hardankii maansada.
Liiska qaar ka tirsan Abwaaniinta ugu Caansan Somalida: Diiwaanka abwaanada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa waayihii dhexe, waxay la fac yihiin taariikhda la hayo abwaanada suugaanta Ameerika.
Guba markaan leenahay waxaan ujeednaa Gubadii dhabta ahayd ee Ogaadeen dhexdii ka fuftay ee 13ka gabayaa oo wada qoyskaa ahi ka qaybqaateen. Shanta beyd ee ugu dambeeya wuxuu Dhoodaan ku qeexayaa in aanu la caytamaynin, ee uu ilaalin doono anshaxa iyo asluubta gabayga, inuu iskala weyn yahay oo uusan la qasan doonin laba nin oo isqabatana aysan ahayn.